Amaqhinga ama-4 oku-ayina ngokushesha futhi kulula | Bezzia
4 amaqhinga oku-ayina ngokushesha futhi kulula
UToñy Torres | 07/05/2022 16:00 | Ikhaya
Ukuthola indlela eshesha kakhulu futhi elula yoku-ayina kungenye yezimiso zabo bonke abafuna ukonga isikhathi ngaphandle kokuyeka ukugqoka izingubo ezihlale zipholishwe kahle. Uku-ayina kungomunye wemisebenzi ezondwa kakhulu, lezo ezigwenywa kakhulu nalezo ezisetshenzwa kakhulu ukuze kuncishiswe ukusetshenziswa kwazo. Futhi nakuba kunezingubo eziningi nezinto zokwakha ezibukeka zizinhle ngaphandle koku-ayina, iqiniso liwukuthi kusenezingubo ezingakwazi ukuhamba ngaphandle koku-ayina.
Manje, lawo mahora amade oku-ayina lapho umshini owawudluliswa engutsheni ngayinye noma izinto zasendlini zazishiywe. Akudingekile, ngenhlanhla njalo ilineni lasekhaya likhiqizwa futhi izingubo zemicu engadingi uku-ayina. Udinga kuphela amaqhinga ambalwa ngesikhathi sokuwasha futhi uzoba nezingubo ezilungile futhi ziphelele ngesikhathi esincane kakhulu.
1 Amaqhinga oku-ayina ngokushesha
1.1 Ungakhohlwa okokuthambisa indwangu
1.2 Gwema ukulayisha ngokweqile umshini wokuwasha
1.3 ukomisa izingubo ngemva kokugeza
1.4 Songa izingubo ngesikhathi ulinde umzuzu woku-ayina
Amaqhinga oku-ayina ngokushesha
Isihluthulelo esiyinhloko sisendleleni yokuhlanza izingubo, ngoba ngamaqhinga ambalwa alula uzothola izingubo zilungile. Kuzodingeka u-ayine kuphela lezo zinto ezidinga kakhulu, njengamahembe namabhulawuzi, iziketi nezingubo. Qaphela la maqhinga oku-ayina alandelayo ngoba kuwufanele ukuchitha isikhathi esithe xaxa ukuhlanza izingubo futhi singachithi amahora ngi-ayina.
Ungakhohlwa okokuthambisa indwangu
Ukuze uwashe kahle kufanele usebenzise okokugeza okufanelekile, ube a umshini wokuwasha ohlanzekile futhi usebenzise okokuthambisa indwangu ukuze izingubo ziphume zinephunga elihlala isikhathi eside. Kodwa lesi sinyathelo sokugcina sibalulekile futhi ukuze uthole izingubo ezibushelelezi. Isithambisi sendwangu sivimbela izingubo ekushwabaneni ngokweqile futhi kwenza uku-ayina kube lula. Faka isilinganiso ekugezeni kokugcina komjikelezo womshini wokuwasha futhi uzowubona umehluko.
Gwema ukulayisha ngokweqile umshini wokuwasha
Ukusebenzisa kahle izinto zikagesi kubaluleke kakhulu ukuze wonge izinsiza. Kodwa uma unezingubo ezishwabana kakhulu, kungcono ungaziwashi ngomthwalo ogcwele. Ukuhlukanisa izingubo kuzokusiza ugcine izinga nokubukeka kwezingubo zakho. Futhi kuzokuvimbela ukuthi ungasayini ngaphezu kwalokho okudingekile.
ukomisa izingubo ngemva kokugeza
Indlela obeka ngayo izingubo zome nayo izowenza umehluko. Into yokuqala ukwelula izingubo kahle kakhulu ngaphambi kokuzilengisa. Zinyakazise futhi ubushelelezi ngezandla zakho, qaphela lapho ubeka ama-tweezers ukuze kungabikho amamaki. Izingubo ezishwabene kakhulu, njengamahembe, ungawalenga ngqo ku-hanger. Umswakama uzodala ukuthi izintambo zinwebe ngaphansi kwesisindo futhi kuzokubiza kancane kakhulu uku-ayina ingubo.
Songa izingubo ngesikhathi ulinde umzuzu woku-ayina
Okuhle kungaba uku-ayina ngokushesha nje lapho uthatha izingubo kulayini wezingubo, kodwa ubani onesikhathi sokukwenza? Impela akekho. Ngokuvamile, izingubo ezihlanzekile zishiywe ekhoneni, ngenkathi ilinde isikhala sokukwazi ukugoqa, uku-ayina nokugcina kahle yonke into endaweni yayo. Lokhu cishe akunathemba, kodwa uma ugoqa izingubo uzishiye kubhasikidi wendwangu, zizoshwabana kancane futhi kuzoba lula uku-ayina uma isikhathi sifika.
Ngelineni lasendlini, kufanele uqiniseke ukuthi wendlala amathawula namashidi kahle kakhulu ngaphambi kokuwabeka. Isisindo semicu emanzi sizokwenza ucezu lube bushelelezi. Ngaphambi kokungena ekamelweni, bushelelezi ingubo ngayinye kahle kakhulu, welule endaweni ehlanzekile, fanisa amakhona bese ugoqa kahle. Ngale ndlela zizohlala zibushelelezi ngaphandle kwesidingo soku-ayina.
Futhi ukuqeda lolu hlu lwamaqhinga oku-ayina kalula futhi ngokushesha, khumbula ukuthi ungahlala wenza ukusesha okuhle ngaphambi kokuthenga izingubo zakho. Khetha izindwangu ezishwabana kancane, kulula ukuzigeza futhi zidinga ukunakekelwa okuncane. Okungenani izingubo zansuku zonke. Londoloza izingubo ezithambile ngezikhathi ezikhethekile futhi ukuze ukwazi ukonga isikhathi esiningi elondolo.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ikhaya » 4 amaqhinga oku-ayina ngokushesha futhi kulula
Izivivinyo ezingcono kakhulu zokunciphisa umzimba futhi wenze ithoni yamathanga akho
Iziphuzo ezenziwe ekhaya ukwehlisa i-cholesterol